Tuesday, Aug 04, 2020 | Last Update : 01:20 PM IST
Sports Cricket 19 Jul 2019 Ravichandran Ashwin ...
Published Jul 19, 2019, 6:33 pm IST
Updated Jul 19, 2019, 7:07 pm IST
The ICC Thursday suspended Zimbabwe Cricket with immediate effect in violation of the global body's constitution.
As a consequence of suspension, ICC's funding to Zimbabwe Cricket will be frozen and representative teams from Zimbabwe will not be allowed to participate in any events sanctioned by the apex body. (Photo: BCCI)
New Delhi: The suspension of Zimbabwe Cricket has affected players not only in their country but it has also found an echo in cricket powerhouse India, with off-spinner Ravichandran Ashwin Friday labelling the development "heartbreaking".
Also Read: ICC suspends Zimbabwe from international cricket
"Extremely heart breaking news for all Zim cricketers and their fans, reading the tweets of @SRazaB24 just shows the agony of cricketers and how their life's have been taken away from them. I pray that the lovely cricket nation returns to its glory asap! #ZimbabweCricket," Ashwin tweeted.
"Zimbabwe Cricket has been suspended with immediate effect. The ICC Board unanimously decided that Zimbabwe Cricket, an ICC Full Member, is in breach of Article 2.4 (c) and (d) of the ICC Constitution which imposes an obligation on Members to provide a process for free and democratic elections and to ensure that there is no government interference in its governance and / or administration for cricket respectively," the ICC had said in a statement.
Tags: ravichandran ashwin, zimbabwe cricket, icc